MG u diyaar garoobay qabashada doorashada aqalka sare | KEYDMEDIA ONLINE
MG u diyaar garoobay qabashada doorashada aqalka sare
Guddiga hirgalinta doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa sheegay in ay u diyaar garoobeen qabashada doorashooyinka Aqalka Sare.
KISMAAYO, Soomaaliya - Guddiga hirgalinta doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa maanta ku dhawaaqay in ay diyaar u yihiin qabashada doorashada xunbaha Aqalka Sare oo sagaaal maalmood ka dhiman yihiin xilligii loo qorsheeyay.
War ka soo baxay guddiga ayaa lagu yiri “ Guddiga higelinta doorashada heer dowlad Goboleed ee Jubaland wuxuu diyaar u yahay qabashada doorashada Xildhibaanada Aqalka sare mudadii loo qorsheeyey ee aheyd 25 July 2021”.
Guddigu, wuxuu guddoonka Baarlamaanka Jubbaland ka codsaday inay magacaabaan guddi doorasho heer Baarlamaan oo guddiga hirgelinta doorashada kala shaqeeyo qabashada doorashada xubnaha Aqalka Sare.
Dhammaan musharixiinta u tartamaya kuraasta Aqalka Sare, ayay ugu baaqeen in ay is dIyaariyaan, halka ay Maamulka Jubbaland ku booriyeen u diyaar garowdo sugidda Amniga Doorashada.
Jubbaland ayaa loo aqoonsan yahay ubucdii ugu weyneed ee sababtay khilaafaadka doorashyinka kadib dagaal siyaasadeed dhex maray Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Farmaajo iyo midka Jubbaland Madoobe.
Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa dhamaadkii bishii hore soo saaray Jadwalka doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo soo idlaan doona 10 October 2021, oo ku beegan doorashadda Madaxweynaha JFS.
Dhanka kale, kaliya todobo maalmood ayaa ka dhiman xilligii lagu heshiiyay in ay diyaar ahaadaan Goobaha Codbixinta Doorashada (23 July 2021).